Bahamas Wasaaradda Dalxiiska ayaa FINN Partners u magacowday Wakaalada Cusub ee UK PR
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Bahamas Wasaaradda Dalxiiska ayaa FINN Partners u magacowday Wakaalada Cusub ee UK PR
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Wakaaladda suuq -geynta iyo isgaarsiinta madaxa -bannaan ee caalamiga ah, FINN Partners, waxaa magacaabay Wasaaradda Bahamas ee Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista (BMOTIA) si ay u siiso adeegyada xiriirka dadweynaha Jasiiradaha Bahamas ee Boqortooyada Ingiriiska. Xafiiska FINN Partners 'xafiiskiisa UK wuxuu kaloo u dhaqmi doonaa sidii wakaaladda xudunta, oo maamuli doonta suuqyada kale ee Yurub oo ay ku jirto Talyaaniga.
FINN waxay ka shaqayn doontaa inay kiciso istiraatiijiyad isgaarsiineed oo dhammaystiran iyo barnaamijka PR si loo kordhiyo sumadda Bahamas ee Boqortooyada Midowday.
Hadafku waa in la abuuro koboc guud ee soo -booqdaha, gaar ahaan la jaanqaadka waddooyinka cusub ee duulimaadka UK.
Duulimaadyada British Airways iyo bilowga duullimaadyada tooska ah ee Virgin Atlantic ee tooska ah ee London laga bilaabo Nofeembar 20, ayaa leh meeshii lagu arkay oo si weyn u korodhay duulimaadyada.
Qandaraaska waxaa ka mid ah fikirka ololaha hal -abuurka, macaamilka iyo xiriirka warbaahinta ganacsiga iyo firfircoonida, isku -dubaridka booqashooyinka baahinta, dhacdooyinka, ka -faa'iideystayaasha wax -ka -qabashada, iyo isgaarsiinta dhibaatooyinka.
Udub dhexaadka shaqada FINN ee BMOTIA waxay noqon doontaa in la dhaqaajiyo istiraatiijiyad isgaarsiineed oo dhammaystiran iyo barnaamijka PR si loo kordhiyo muuqaalka sumcadda Bahamas ee suuqa UK. Wada -hawlgalayaasha FINN waxay kor u qaadi doonaan dhaqanka soo jireenka ah, taariikhda, waxqabadyada firaaqada, dabeecadda iyo cunnada Jasiiradaha Bahamas, si ay gacan uga geystaan ​​abuurista koboca guud ee soo -booqdaha soo -galayaasha, gaar ahaan marka la waafajiyo waddooyinka cusub ee duulimaadka UK.
Mudane I. Chester Cooper, Ra'iisul Wasaare Ku -Xigeenka ahna Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas ayaa faallo ka bixiyay: “Aragtidayadu waa inaan noqono hoggaamiye warshadeed oo caalami ah xagga suuqgeynta iyo maareynta meelaha loo socdo, si joogto ah uga qaybqaata kobcinta dhaqaalaha qaranka. Wada -hawlgalayaasha FINN waxay noo soo bandhigeen hab dhammaystiran oo hal -abuur leh si aan u taageerno istiraatiijiyadeena oo naga caawinaysa inaan gaarno yoolalkeenna ganacsi si aan u kordhinno dalxiiska UK. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan dooranay lamaanaha PR ee saxda ah si aan u horumarino meeshayda cajiibka ah oo aan sugno wada -shaqeyn guul leh. ”
Joy Jibrilu, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas, ayaa faallo ka bixisay, “Waan ku faraxsanahay inaan u magacawnay FINN Partners inay noqoto wakaaladda PR ee diiwaanka UK. Soo jeedintoodu waxay si cad u muujisay fahamkooda ku saabsan soo jeedintayada sumadda iyo ujeeddooyinka isgaarsiinta, iyo aqoontooda iyo khibradooda suuqa Kariibiyaanka ayaa ah midda labaad. Jasiiradaha Bahamas waxay bixiyaan dhaqamo xiiso badan, madadaalo iyo waayo -aragnimo jaceyl oo aanan sugi karin inaan la wadaagno socotada Ingiriiska. Iyada oo la raacayo kororka hawo -qaadista UK, hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee aan ku dhiirrigelin lahayn ballansashada gobolkan. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno kooxda FINN si aan u sii kordhinno wacyiga Bahamas iyo tirada badan ee meesha loo socdo. ”
Debbie Flynn, Hogaamiyaha Tababarka Socdaalka Caalamiga ah, FINN Partners ayaa faallo ka bixiyay: “Waxaan ognahay in socdaalayaasha Ingiriiska ay hadda raadinayaan tacabur, goobo bannaan, qurux dabiici ah iyo waayo-aragnimo dhaqameed hodan ah, Bahamas-na waxay siisaa kuwaan tiro badan. Iyadoo dhawaan dib loo bilaabay tooska
Duulimaadyada British Airways iyo bilaabista duullimaadyada tooska ah ee Virgin Atlantic ee tooska ah ee London ilaa Bahamas laga bilaabo Noofembar 20 -keeda, ayaa leh meeshii lagu arki lahaa kor u kac weyn oo xagga samaynta hawada ah
si aad ah loogu heli karo socotada UK intii hore. Waxaa jira a fursad aad u weyn oo aan ku soo bandhigi karno waxa loogu talo galay inay bixiso si loo caawiyo kororka dadka soo booqda ee ka imanaya UK, runtiina ma sugi karno inaan bilowno iskaashiga aan la leenahay Wasaaradda Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas. ”
FINN Partners UK Travel portfolio baaxad weyn waxaa ka mid ah kooxaha hoteellada hogaaminaya sida Accor Luxury iyo meelaha ay ka mid yihiin Singapore, Gobolka Capital USA iyo Iceland.
Iyada oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo qiyaamo iyo 16 meelood oo jasiirad u gaar ah, Bahamas waxay ku taal meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, oo bixisa baxsi fudud oo duuliye ah oo ka safri doonta dadka safarka ah maalin kasta. Jasiiradaha Bahamas waxay leeyihiin kalluumeysi heer caalami ah, quusitaan, doonid, hawlo ku saleysan dabeecad, kumanaan mayl oo ah biyaha ugu quruxda badan dhulka iyo xeebaha qaaliga ah ee sugaya qoysaska, lammaaneyaasha iyo dalxiisayaasha. Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan bahmas.com ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.
Ku saabsan FINN Partners, Inc.
Waxaa lagu aasaasay 2011 mabaadi'da asaasiga ah ee hal -abuurnimada iyo iskaashiga iskaashiga, FINN Partners waxay leedahay in ka badan afar jibbaar qiyaas ahaan siddeed sano gudahood, oo noqotay mid ka mid ah hay'adaha madaxa bannaan ee sida dhaqsaha ah u koraya. Xawaaraha diiwaangelinta ee adeeg-buuxa iyo isgaarsiinta ee shirkadda isgaarsiintu waa natiijo ka dhalatay koritaanka dabiiciga ah iyo isku-darka shirkado cusub iyo dad cusub adduunka FINN iyada oo loo marayo falsafad guud. Iyada oo leh in ka badan 800 oo xirfadlayaal ah, FINN waxay siisaa macaamiisha helitaan caalami ah iyo karti Ameerika, Yurub iyo Aasiya iyo xubinnimadeeda Ururka Xiriirka Dadweynaha ee Caalamiga ah (PROI). Xaruntoodu tahay New York, xafiisyada kale ee FINN waxay ku yaalliin Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Frankfurt, Jerusalem, London, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, Shanghai , Singapore, Koonfurta California iyo Washington, DC Naga hel finnpartners.com oo nagu raac Twitter iyo Instagram @finnpartners iyo @finnpartnerstravel. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan FINN Partners, booqo finnpartners.com.